मुसाले दुख दिइरहेकाे छ? यस्ता घरेलु उपाय अपनाउनुहाेस् – Himalaya TV
Home » समाचार » मुसाले दुख दिइरहेकाे छ? यस्ता घरेलु उपाय अपनाउनुहाेस्
मुसाले दुख दिइरहेकाे छ? यस्ता घरेलु उपाय अपनाउनुहाेस्
६ माघ २०७४, शनिबार ०९:१७
अनेक उपाय लगाउँदा पनि घरमा मुसाले हैरान पारिरहेकाे छ भने अाजैबाट घरेलु विधिकाे प्रयाेग गर्नुहाेस् । याे विधि अनुसार न विषादी प्रयाेग गर्दा जस्ताे मरेकाे मुसा नभेटेर गन्हाउने चिन्ता, न कुनै खर्च, न कुनै तनाव वा हैरानी ।
घरलार्इ जतिसुकै सफासुग्घर राखेपनि कहिलेकांही मुसाले सताउन छाेड्दैन । यी घरेलु चिजकाे प्रयाेग गरी मुसालार्इ सजिलै भगाउन सक्नुहुनेछ ।
कमै मानिसलार्इ मात्र थाहा हुन सक्छ कि मुसाले प्याजकाे गन्ध खप्न सक्दैन भनेर । प्याजकाे गन्ध अाउनेबित्तिकै मुसा त्यसकाे वरपर अाउँदैन । जहाँबाट मुसा घरभित्र प्रवेश गर्ने संभावना रहन्छ, ती ठाउँहरूमा प्याजकाे टुक्रा राख्नुहाेस् । खासगरी झ्याल ढाेकाका प्वालमा काटेकाे प्याजकाे टु्क्रा राखेर हेर्नुहाेस्, केही दिनभित्रै परिणाम सकारात्मक अाउनेछ ।
पुदिनाकाे बास्ना पनि मुसालार्इ मन पर्दैन । त्यसकारण पुदिनाकाे पातलार्इ कपडाकाे टुक्रा वा कागजमा पाेकाे पारेर मुसा बढी अाउने ठाउँमा राख्नुहाेस् । यसबाहेक पुदिना-पत्ता पिसेर मुसा अाउने ठाउँ अर्थात् झ्यालढाेकाका प्वालहरूमा दल्नुहाेस् । अब मुसा फर्केर पनि तपाइँकाे घरतिर हेर्नेछैन ।
तेजपत्ताले खानाकाे स्वाद मात्र बढाउँदैन, बरु यसकाे तेज गन्ध मुसालार्इ हैरान पार्न काफी हुन्छ । त्यसैले घरमा मुसा बढी अाउनेजाने ठाउँ हेरेर तेजपत्ता राखिदिनुहाेस् । यति गर्नुभयाे भने अब मुसाले दुख दिनेछैन ।